Windows9လာမည် !!! ~ (IT) ကိုထိုက်
Windows9လာမည် !!!
Windows 8 ထွက်တာတောင် မကြာသေးပါဘူး၊ Microsoft က အခု Windows9နဲ့ Windows Blue ဆိုတဲ့ Project သစ်နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ဒီနှစ်နွေရာသီထဲမှာဘဲ အဆိုပါ Windows နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခု ထွက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Windows Blueက Windows 8 ရဲ့ upgrade ဖြစ်လာပြီး Windows9ကတော့ နောက်ထပ် သီးခြား Operating System တစ်ခုအဖြစ် သီးသန့်ထွက်ရှိ လာမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေပြန့်နေပါတယ်။
Microsoft ရဲ့ အတွင်းပိုင်းအသိုင်းအ၀န်းကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ Windows9ရဲ့ Beta Version ကို 2014 ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ စတင်တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလထဲမှာ stable product အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Internet Explorer ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ie 11 ဟာ Windows Blue မှာ beta version အဖြစ်နဲ့သာ စတင်မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပြီး Windows9မှာမှ stable app တစ်ခုအဖြစ် ပွဲထွက်လာမယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Microsoft ဟာ လတ်တလောမှာ Windows9ရဲ့ touch support ပိုင်းကို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် tablet version နဲ့ mobile phone version ပါ ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။
Vista အောင်မြင်မှုမရခဲ့တုန်းက Windows7နဲ့ ပြန်ပြီး အဖတ်ဆယ်သလိုမျိုး ခုအချိန်မှာ ထင်သလောက်မပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ Windows 8 အတွက် Microsoft က Windows9နဲ့ ပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်မလားဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
Tech & Security News/ Ref:softpedia
YouTube က Video တွေကို Android Device က Download ခ...
Android ရဲ့ ဖုန်းလိုင်းဆွဲအား၊ Internet ဆွဲအား၊ ဘက...
Android ဖုန်းတွေမှာ Connected ဖြစ်ပြီးသား Wifi Pas...
Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို Downloa...
Facebook Account Hacking With ARP Poisoning ( Eboo...
Ravensword Shadowland 1.21 APK For Android OS
အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ အင်တာနက်သုံးတတ်သူများ သတိထားရမည...
Keygen For All Sony Products (Sony ထုတ် Softwre တေ...
Bigasoft YouTube Downloader_Pro v1.2.26.48 + Crack...
Youtube နှင့် အခြားသော ဝက်ဆိုက်ဒ် တွေက Video တွေကိ...
Android Phone မှာ ငွေလက်ကျန်စစ်ပေးနိုင်တဲ့ 1st MM ...
လာပြီနော် လုံးဝအလန်းဇယား Game ကြီးတွေ Dungeon Hunt...
ဖုန်းအနိမ့်နဲ့ HD Game အကြီးစားတွေကို ကစားနိုင်တဲ့...
Internet Lock v6.0.3 + Serial
RemoveWAT 2.2.7 (Window Activate လုပ်မရရင် Windows...
China Clone Android version 4.1.1 Phone တွေကို Roo...
CD, DVD,HD DVD, Blu-Ray တွေထဲက File,Data တွေ ပြန်ယ...
Google Play သုံးမရသေးတဲ့ Android devices အတွက်
တစ်စက္ကန့်ကို ပုံ ၃၀ ထိရိုက်ပေးနိုင်မယ့် Android ca...
Real Soccer 2013 V.1.0.6 Offline APK For Android O...
Sony Xperia Z ကို Root ပြုလုပ်နည်း
ဖုန်းအသုံးပြုရတာ နှေးနေတယ်.... App တစ်ခုခုဖွင့်ရင်...
Sony Xperia : S, T, P , Acro S, Ion , Tipo , Table...
နာမည်ကြီး Android Phone/Tablet တွေနဲ့ တရုတ် Androi...
Easy Root Tool Kit Version4( 1 MB )
ကွန်ပျူတာသုံးစွဲ သူုတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက်အလက...
imobile istyle Q နဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 .ဖုန်း...
All Window Activation Key For (Window 8,7,XP) Upda...
Internet Cyclone 2.16 Full Version ( 1 MB )
IP တည်နေရာအား စုံစမ်းပေးမယ့် Software ( For Tracke...
GSM , CDMA ငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို Crack ပြီးသုံးနည်း
ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် အသုံးစရိတ်အား မကျအောင်ပြု့ လုပ...
Facebook News Feed ဒီဇိုင်းသစ်ယူမယ်
WiFi Hacker (BEST VERSION) v2.2.14667 Apk For Andr...
ဖုန်းကတဆင့် Viber Code တောင်းလို့ မရသူတွေအတွက်
Android Phone တွေမှာ Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက်...
Format ချမရတဲ့ USB,Flash Drive တွေကို အလွယ်တကူ For...
Android Phone တစ်ခုလုံးကို 3D Style ကြည့်နိုင်တဲ့ ...
Samsung Brand အားလုံးမှာ Root မလိုပဲနဲ့ Font Style...